စပါးအတွက် ဂျက်ဆန်ဖာနန်ဒက်စ်က ဘာတွေဆောင်ကျဉ်းပေးလာမှာလဲ? | FOX Sports Myanmar
စပါးအတွက် ဂျက်ဆန်ဖာနန်ဒက်စ်က ဘာတွေဆောင်ကျဉ်းပေးလာမှာလဲ?
အပြီးသတ်ဝယ်ယူနိုင်ခွင့် သဘောတူညီချက်နဲ့အတူ စပါးကတော့ ဘင်ဖီကာကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆန်ဖာနန်ဒက်စ်ကို ၁၈ လအငှားနဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ အသက် ၂၁နှစ်အရွယ် ကစားသမားက မော်ရင်ဟိုလက်ထက် စပါးအသင်းရဲ့ ပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားသမားဆီကနေ တော့တင်ဟမ်က ဘာတွေကို မျှော်လင့်နေခဲ့လဲ၊ ဖာနန်ဒက်စ်ကရော အသင်းအတွက် ဘာတွေကို ယူဆောင်ပေးလာနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ်က ဘင်ဖီကာလူငယ်အသင်းကို ၂၀၀၉ မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်အကြာမှာ အသင်းကြီးအတွက် စကစားပေးခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီမှာ သူက ၁၀၄၄ မိနစ်ကစားပေးခဲ့ရပြီး ဗဟိုကွင်းလယ်မှာ ကစားပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒီရာသီမှာတော့ ၂၁၅ မိနစ်ပဲ ကစားပေးထားရပြီး နေရာလည်း ပြောင်းလဲကစားပေးခဲ့ရပါတယ်။ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ညာခြမ်းမှာ ကစားပေးခဲ့ရတာပါ။ ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သူက ပြိုင်ဘက်အသင်းကွင်းဘယ်ခြမ်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ကစားနိုင်လဲဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ သူက ပြေးလွှားရင်းနဲ့ အရေးပါတဲ့ ပေးပို့မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သလို အလွတ်တည်ကန်ဘောတွေမကြာခဏရရှိအောင်လည်း ကစားနိုင်သူပါ။ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးချင်းကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းကို အောက်မှာပြသထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်။
သူက တစ်ပွဲကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ဦးချင်းကျော်ဖြတ်နိုင်မှု ၈ကြိမ်ကျော်အထိ ရှိပါတယ်။ ဘောလုံးနဲ့အတူ ဆွဲပြေးနိုင်မှုက ၂.၈ ကြိမ်ရှိပြီး သူ့ကြောင့် အသင်းဘက်က အလွတ်တည်ကန်ဘောကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃.၆ ကြိမ်လောက်အထိ ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါက စပါးအတွက်တော့ အဖိုးတန်မယ့် အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်အသင်းကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ ရွေ့လျားကစားနေတဲ့ ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် ဂိုးပေါက်နဲ့ နီးကပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ မကြာခဏဆိုသလို စပါးက ဖရီးကစ်ကန်ခွင့်တွေ ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ကစားဟန်ကြောင့်လည်း ပြိုင်ဘက်အသင်းခံစစ်မှာ နေရာလွတ်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပြီး ဆွန်ဟောင်မင်၊ မော်ရာတို့လို လျင်မြန်တဲ့ကစားသမားတွေအတွက် အသင့်နေရာယူပြီး ဂိုးတွေသွင်းလာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။
သူက ပြိုင်ဘက်ကွင်းဘက်ခြမ်းရဲ့ အတွင်းနေရာတွေအထိ လိုက်ဆော့ပေးခဲ့ပြီးတော့ တောင်ပံဧရိယာတွေဘက်မှာလည်း တော်တော်လေးလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကမှတဆင့် သူက အသင်းဖော်တွေဆီကို ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ဖာနန်ဒက်စ်က ဧရိယာအတွင်းကနေ ဂိုးကန်သွင်းခွင့် ၆ ကြိမ်ပဲ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဝေးကနေ ကန်သွင်းမှုက ၁၀ ကြိမ်အထိ ရှိခဲ့ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် သူက ညာခြမ်းဘက် ၂၅ ကိုက်အကွာလောက်ကနေ ကန်သွင်းယူမှုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘင်ဖီကာကစားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ၇ ပွဲဆက်တိုက် ဖာနန်ဒက်စ်က ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ရခြင်းမရှိပဲ နည်းပြဘရူနိုလာဂီရဲ့
ဒါပေမယ့်လည်း စပါးအသင်းပရိသတ်တွေကတော့ ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ကြားက ရင်းနှီးမှုကြောင့် ဒီကစားသမားဆီကနေ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ဆစ်ဆိုကို ဒဏ်ရာရရှိနေပြီး အန်ဒွန်ဘီလီက ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဟယ်ရီဝင့်ခ်၊ ဒီယာတို့ကလည်း ဒီရာသီမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လုံးထွေးနေရပြီး ဗစ်တာဝမ်ယာမာ နဲ့ အိုလီဗာစကစ်တို့ပဲ စပါးကွင်းလယ်မှာ ၀င်ကစားပေးနိုင်သူတွေအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ အဲရစ်ဆန်ကလည်း အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ ဖာနန်ဒက်စ်ရောက်ရှိလာမှုက စပါးပရိသတ်တွေကို အမျှော်လင့်ကြီးမျှော်လင့်မိစေတာပါ။ ကစားသမားအတွက်လည်း အသင်းမှာ ကစားခွင့်ရဖို့ အခွင့်အရေးရရှိဖွယ်ရှိနေပြီး အသုံးချနိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါတော့တယ်။
အပွီးသတျဝယျယူနိုငျခှငျ့ သဘောတူညီခကျြနဲ့အတူ စပါးကတော့ ဘငျဖီကာကှငျးလယျလူ ဂကျြဆနျဖာနနျဒကျဈကို ၁၈ လအငှားနဲ့ ချေါယူလိုကျပါပွီ။ အသကျ ၂၁နှဈအရှယျ ကစားသမားက မျောရငျဟိုလကျထကျ စပါးအသငျးရဲ့ ပထမဆုံးချေါယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားလညျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီကစားသမားဆီကနေ တော့တငျဟမျက ဘာတှကေို မြှျောလငျ့နခေဲ့လဲ၊ ဖာနနျဒကျဈကရော အသငျးအတှကျ ဘာတှကေို ယူဆောငျပေးလာနိုငျမလဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့ခငျြပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈက ဘငျဖီကာလူငယျအသငျးကို ၂၀၀၉ မှာ ရောကျရှိခဲ့ပွီး ၁၀ နှဈအကွာမှာ အသငျးကွီးအတှကျ စကစားပေးခဲ့ရပါတယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘောလုံးရာသီမှာ သူက ၁၀၄၄ မိနဈကစားပေးခဲ့ရပွီး ဗဟိုကှငျးလယျမှာ ကစားပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒီရာသီမှာတော့ ၂၁၅ မိနဈပဲ ကစားပေးထားရပွီး နရောလညျး ပွောငျးလဲကစားပေးခဲ့ရပါတယျ။ ကှငျးလယျတိုကျစဈညာခွမျးမှာ ကစားပေးခဲ့ရတာပါ။ ပုံကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ သူက ပွိုငျဘကျအသငျးကှငျးဘယျခွမျးမှာ ဘယျလောကျထိ ကစားနိုငျလဲဆိုတာကို သိနိုငျပါတယျ။ သူက ပွေးလှားရငျးနဲ့ အရေးပါတဲ့ ပေးပို့မှုတှကေို ပွုလုပျပေးနိုငျသလို အလှတျတညျကနျဘောတှမေကွာခဏရရှိအောငျလညျး ကစားနိုငျသူပါ။ သူ့ရဲ့ တဈဦးခငျြးကြျောဖွတျနိုငျစှမျးကို အောကျမှာပွသထားတဲ့ ပုံကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ သိနိုငျပါတယျ။
သူက တဈပှဲကို ပမျြးမြှအားဖွငျ့ တဈဦးခငျြးကြျောဖွတျနိုငျမှု ၈ကွိမျကြျောအထိ ရှိပါတယျ။ ဘောလုံးနဲ့အတူ ဆှဲပွေးနိုငျမှုက ၂.၈ ကွိမျရှိပွီး သူ့ကွောငျ့ အသငျးဘကျက အလှတျတညျကနျဘောကို ပမျြးမြှအားဖွငျ့ ၃.၆ ကွိမျလောကျအထိ ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါက စပါးအတှကျတော့ အဖိုးတနျမယျ့ အခကျြအလကျတှဖွေဈပါတယျ။ ပွိုငျဘကျအသငျးကှငျးဘကျခွမျးမှာ ရှလြေ့ားကစားနတေဲ့ ကစားသမားဖွဈတာကွောငျ့ ဂိုးပေါကျနဲ့ နီးကပျတဲ့နရောမြိုးမှာ မကွာခဏဆိုသလို စပါးက ဖရီးကဈကနျခှငျ့တှေ ရရှိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ကစားဟနျကွောငျ့လညျး ပွိုငျဘကျအသငျးခံစဈမှာ နရောလှတျတှေ ပျေါလာနိုငျပွီး ဆှနျဟောငျမငျ၊ မျောရာတို့လို လငျြမွနျတဲ့ကစားသမားတှအေတှကျ အသငျ့နရောယူပွီး ဂိုးတှသှေငျးလာနိုငျဖှယျရာ ရှိပါတယျ။
သူက ပွိုငျဘကျကှငျးဘကျခွမျးရဲ့ အတှငျးနရောတှအေထိ လိုကျဆော့ပေးခဲ့ပွီးတော့ တောငျပံဧရိယာတှဘေကျမှာလညျး တျောတျောလေးလှုပျရှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီကမှတဆငျ့ သူက အသငျးဖျောတှဆေီကို ဖွတျတငျပေးပို့မှုတှေ ပွုလုပျပေးခဲ့တာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ဖာနနျဒကျဈက ဧရိယာအတှငျးကနေ ဂိုးကနျသှငျးခှငျ့ ၆ ကွိမျပဲ ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဝေးကနေ ကနျသှငျးမှုက ၁၀ ကွိမျအထိ ရှိခဲ့ပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့ သူက ညာခွမျးဘကျ ၂၅ ကိုကျအကှာလောကျကနေ ကနျသှငျးယူမှုပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။ ဘငျဖီကာကစားခဲ့တဲ့ နောကျဆုံး ၇ ပှဲဆကျတိုကျ ဖာနနျဒကျဈက ပါဝငျကစားပေးခဲ့ရခွငျးမရှိပဲ နညျးပွဘရူနိုလာဂီရဲ့
ဒါပမေယျ့လညျး စပါးအသငျးပရိသတျတှကေတော့ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ မျောရငျဟိုတို့ကွားက ရငျးနှီးမှုကွောငျ့ ဒီကစားသမားဆီကနေ အသငျးအတှကျ ခွစှေမျးကောငျးတှေ ပွသပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ ဆဈဆိုကို ဒဏျရာရရှိနပွေီး အနျဒှနျဘီလီက ကွံ့ခိုငျမှုမပွညျ့ဝဘူးဖွဈနပေါတယျ။ ဟယျရီဝငျ့ချ၊ ဒီယာတို့ကလညျး ဒီရာသီမှာ ဒဏျရာတှနေဲ့ လုံးထှေးနရေပွီး ဗဈတာဝမျယာမာ နဲ့ အိုလီဗာစကဈတို့ပဲ စပါးကှငျးလယျမှာ ဝငျကစားပေးနိုငျသူတှအေဖွဈ ရှိနပေါတယျ။ အဲရဈဆနျကလညျး အနာဂတျနဲ့ပတျသကျပွီး ခွစှေမျးမပွနိုငျလို့ ဖာနနျဒကျဈရောကျရှိလာမှုက စပါးပရိသတျတှကေို အမြှျောလငျ့ကွီးမြှျောလငျ့မိစတောပါ။ ကစားသမားအတှကျလညျး အသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ အခှငျ့အရေးရရှိဖှယျရှိနပွေီး အသုံးခနြိုငျဖို့သာ လိုအပျပါတော့တယျ။
Home Football Premier League စပါးအတွက် ဂျက်ဆန်ဖာနန်ဒက်စ်က ဘာတွေဆောင်ကျဉ်းပေးလာမှာလဲ?